Izinto ezizodwa okanye iindawo zesicelo zifuna inkqubo ekhethekileyo.
I-flux esetyenzisiweyo ngexesha lenkqubo yokuqhelanisa nokuqhekeza ihlala ibangela ukubola kunye nokutsha kwindawo yokusebenza. Ukubandakanywa kwe-Flux kunokukhokelela ekonakaleni kwezinto zepropathi. Ngaphaya koko, ngenxa yeoksijini esele ikho emoyeni ukutshintsha kombala kwendawo yokusebenza.
Ezi ngxaki zinokuthintelwa xa ubhrasha phantsi kwegesi engenayo okanye vacuum. Indlela yegesi ye-inert inokudityaniswa kakuhle kunye nokufudumeza okungafunekiyo njengoko kungekho mlangatye uvulekileyo ngexesha lokufakwa kwe-brazing phantsi kwegesi yokukhusela kwaye iimeko ezinxulumene nokuhamba zinokulawulwa ngcono.
iindidi Teknoloji tags ukugquma, Ubungakanani obuphezulu begesi yokufaka igesi, Ukuchithwa kwegesi kwi-inert, ukufakelwa kwegesi eshushu, ukufudumeza irhasi, Ukunyibilikisa irhasi, ukungeniswa kwegesi egalelwe ngaphakathi, irhasi engena, Ukubhabha kwegesi ngaphakathi, Inkqubo yokukhangela igesi, ukufudumeza irhasi, igesi egalelweyo, ukufudumeza igesi egalelweyo, I-inert gas soldering Post yokukhangela